MintBackup: Mee nkwado ndabere nke ngwugwu gị | Site na Linux
MintBackup: Mee nkwado ndabere nke ngwugwu gị
LinuxMint ọnọ MintBackup, ihe magburu onwe ya iji kwado akwụkwọ, faịlụ, folda na ọbụna ihe niile software na anyị awụnyere na kọmputa anyị.
Ọ naghị eme n'ezie ndabere nke nchịkọta ndị arụnyere, mana ọ na-ebupụ ndepụta ahụ na faịlụ nke anyị ga-eji mechara tinyeghachi otu nchịkọta ahụ. Nke a bara uru ma ọ bụrụ na anyị ga-edozi kọmputa anyị, ebe ọ bụ na anyị ekwesịghị icheta na anyị etinyeburu. Ka anyị hụ ngwá ọrụ a.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, interface ahụ dị nnọọ mfe. Anyị nwere nhọrọ abụọ n’elu:
Mepụta ndabere nke faịlụ.
Mepụta ndabere nke software ahọrọ.
N'okpuru nke ọ bụla, nhọrọ ya na mweghachi dị iche iche:
Weghachi ngwanrọ site na nhọrọ.
1 Mepụta faịlụ nchekwa.
2 Iweghachi na faịlụ echekwara.
3 Chekwa faịlụ.
Mepụta faịlụ nchekwa.
Ọ bụrụ na anyị pịa Nhọrọ Software ndabere anyi kwesiri inweta ihe dika:
Anyị na-ahọrọ folda ebe anyị chọrọ ịchekwa faịlụ Ndabere ma gaa n'ihu na nzọụkwụ ọzọ (Gaba).
Ezigbo ihe banyere ngwa ọrụ a bụ na anyị nwere ike ịhọrọ ngwugwu nke anyị chọrọ ịchekwa. A ga-atụ aro ka anyị zọpụta ha niile na ndabara, ma ọ bụrụ na usoro anyị na-arụ ọrụ nke ọma.
Anyị na-anabata (Tinye) y MintBackup Ọ ga-emepụta faịlụ n'ime folda ahọrọ na usoro: software_selection_host@2011-01-20-1045-package.list.
Iweghachi na faịlụ echekwara.
Iji weghachi anyị pịa Weghachi Software site na nhoputa (Weghachi Nhọrọ Software) ma jụọ anyị ka anyị chọta ebe faịlụ a dị software_selection_host@2011-01-20-1045-package.list. nke anyi zoputara na mbu.
Anyị na-ahọrọ faịlụ ma gaa n'ihu na nzọụkwụ ọzọ, ebe MintBackup Ọ ga-egosi anyị ngwugwu anyị chọrọ ịwụnye (Ọ ga-eme ya site na nchekwa nke anyị nyere ike).
Ihe abuo kwesiri ka edo anya:
Ọ bụrụ na etinyererịrị Software ahụ, Mintbackup agaghị eme ihe ọ bụla banyere ya, naanị na-agwa anyị na ihe niile emechaala nke ọma.
Ọ bụrụ na anyị jiri aka Gdebi ma ọ bụ Dpkg wụnye ngwugwu, MintBackup agaghị arụnye ya.
Nke a nwere ike melite ma emechaa, mana ugbu a ọ na - arụ ọrụ otu a.
Ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ ịchekwa faịlụ anyị, ana m akwado ka ị jiri ngwaọrụ mpụga, ma ọ bụ draịvụ ike nwere otu ma ọ bụ karịa ikike karịa nke eji ya eme ihe. MintBackup ihe ọ na-eme bụ i copyomi ihe anyị chọrọ ịchekwa na folda anyị wepụtara maka ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » MintBackup: Mee nkwado ndabere nke ngwugwu gị
Mmemme a dị ka APTONCD?
Enwere m ike iji ya wụnye mmemme na-enweghị mkpa ịntanetị?
Ofufe Vision gam akporo Mbadamba